Chii The inoita Mode Of Travel In Europe? | Save A Train
musha > Travel Europe > Chii The inoita Mode Of Travel In Europe?
Chinhu chokutanga vanhu vanofunga kana iwe vanoshamisika chii inoita vaiita zvokufamba mu Europe iri kubhururuka. Asi isu angapikisana! Nepo chaiko zvinobhururuka kungava mhanyisa, hapana nomumugwagwa kwaitora nguva pane dzendege kushomeka nguva kufamba iwe chaizvoizvo kuponesa. Zvinoitawo anotozopedzisira anodhura kamwe iwe chinokonzera nemotokari zvinotora kuenda dzendege, wo! Regai kunyange kuti isu musi congested mumigwagwa, humongous zviteshi, kuti interminable mitsetse kuongorora uye neseri chibatiso, uye mukwende Kutaura sokunonoka pamusoro kusvika zvose wedzera vakakwira!
Ndinofunga kuti tinogona zvose vanobvumirana kuti bhazi kufamba ari Njerama! Kunyanya kana iwe kuzvifananidza kunyaradzwa pamunenge pamwe nezvitima. Not nechokwadi asi pamusoro chii inoita vaiita zvokufamba mu Europe iri asi? Verenga pamusoro!
Chii inoita vaiita zvokufamba muna kweBrussels:
Nzira yakanakisisa kufamba kubva kweBrussels riri nechitima. Tickets inogona wakawandirwa kuburikidza Save A Train mukati maminitsi pasina yakavanzwa mari. KweBrussels zvinonakidza inzvimbo dzinokatyamadza akitekicha uye nhoroondo inonakidza kugara munzvimbo dzose dzomumusha uye alleyway.
KweBrussels hwava chinhu munhu wose uye inopa zvinodyiwa European akadai unyanzvi uye mavakirwo pamwe zvakawanda kujairika zvinokwezva. Regai kushanyira kweBrussels kana iwe uri kudya sezvo fries, mussels, uye doro nokukurumidza kuti zvishuvo. The yakanakisisa chikamu pamusoro kweBrussels ndechokuti zviri zvakare Super svikika nechitima uye iwe unogona kushanyira mamwe maguta mukati Europe nyore uye nokukurumidza. Isu vakaita pamasvomhu kwauri 😉
Travel kubva kweBrussels kuna Paris
Rwendo rwokubva KweBrussels kuna Paris inogona kupedzwa nechitima chete pasi 1:30 f. Kakawanda zvakananga nezvitima abve kweBrussels anosvika Paris’ Gare du Nord yose zuva. Vols kweBrussels kuParis’ Charles de Gaulle Airport kutora pamusoro 5 maawa apo Airport ndavandira nguva vari kufungwa nezvayo.
Flight Time – 5:30f
Rovedzai Kubva kweBrussels kuna Paris nguva – 1:22 f
Time Aponese: 4:08 f
Travel kubva kweBrussels kuLondon
Rwendo rwokubva KweBrussels kuLondon inogona kupedzwa muna pfuurei 2 maawa. The nzira uchitsanya pamusoro senga ari parwendo nechitima, pamwe kakawanda zvakananga Eurostar nezvitima kusvika London kwakaita St Pancras yemapurisa zuva rose. Vols kweBrussels kuLondon Heathrow Airport kutora pamusoro 5 maawa apo Airport ndavandira nguva vanoonekwa.
Rovedzai Kubva kweBrussels kuLondon nguva – 2:18 f
Flight Time – 5:36 f
Time Aponese: 3:18 f
Travel kubva kweBrussels kuna Amsterdam
Kuenda kubva KweBrussels kuna Amsterdam Zvinotora chete pasi 2 maawa nechitima. Kakawanda zvakananga nezvitima anosvika Amsterdam kwakaita Central Station yose zuva. Vols kweBrussels kuna Amsterdam kuti Schiphol nhandare yendege Tora chinzvimbo 5 maawa apo Airport ndavandira nguva vari kufungwa nezvayo.
Rovedzai Kubva kweBrussels kuna Amsterdam nguva – 1:50 f
Flight Time – 5:05 f
Time Aponese: 3:15 f
Travel kubva kweBrussels kuna Lyon
Rwendo rwokubva kweBrussels kuna Lyon kunotora inenge 3:30 f. The uchitsanya nzira yokufambisa ari parwendo nechitima, pamwe kakawanda zvakananga nezvitima asvika Lyon yose zuva. Vols kweBrussels kuna Lyon kutora chete pasi 6 maawa apo yendege dzaifanoiswa uye kumirira nguva vanobatanidzwa.
Rovedzai Kubva kweBrussels kuna Lyon nguva – 3:29 f
Flight Time – 5:50 f
Time Aponese: 2:21 f
Travel kubva kweBrussels kuna muFrankfurt
Zvinotora pfuurei 3 maawa kuenda nechitima kubva kweBrussels kuenda muFrankfurt. Direct nezvitima svika muFrankfurt kazhinji yose zuva. In kuenzanisa, voos kweBrussels kusvika muFrankfurt Tora chinzvimbo 5 maawa apo Airport dzaifanoiswa nguva inocherechedzwa kukurukurwa.
Rovedzai Kubva kweBrussels kuna muFrankfurt nguva – 3:05 f
Flight Time -5:15 f
Time Aponese: 2:10 f
Chii inoita vaiita zvokufamba muFrance:
Ndiani asingadi France? Takaona akanyorwa zvisingaverengeki Blogs pamusoro yakanakisisa mativi France. From Mazano nokuti vaifamba nechitima kubva Paris kuti Nice to Where you can kuwana zvakanakisisa French fries muFrance kana Michelin Star restaurants muFrance kana uchida. nyonyova, Uri gonna uchida ikoko nekukurumidza! The inoita nzira kuti ikoko? Nechitima Ichokwadi!
chitima kufamba mu France ndiyo nzira inonyatsobudirira nezvekuenda Paris kune mamwe maguta muFrance. Travel from Paris to the south of France–albeit a bit pricey–is best done by train; ndege uye chitima mitengo vari yemanyorero akafanana, asi chitima kufamba kuri ndoda ane dzichikunetsa.
Nepo kufamba nebhazi kana kuchovha-mugove isingadhuri, uwandu maawa zvaizotora inongova kwete inoshanda. The inoita vaiita zvokufamba mu Europe anogara nechitima, uye chokufamba France hakuna kusiyana!
Heino mienzaniso rinoponesa nguva-:
Amsterdam kuna Paris
Rwendo rwokubva Amsterdam kuParis kunogona kupedzwa muna anenge 3.5 maawa. The inoita vaiita zvokufamba chinhu soro-nokukurumidza chitima, pamwe kakawanda zvakananga nezvitima kusvika pa Amsterdam Centraal Station yose zuva. Flights kubva Paris’ Charles de Gaulle Airport kuna Amsterdam raMwari Schiphol Airport kutora ndezvomuzana 4 maawa apo inouraya ndavandira nguva vanoonekwa.
Rovedzai Kubva Amsterdam kuna Paris nguva – 3:26 f
Flight Time – 4:05 f
Time Aponese: 0:39 f
Travel kubva kuLondon kuti Paris
Unogona kupedza rwendo pakati United Kingdom uye French misoro chete pamusoro 2 maawa. The inoita vaiita zvokufamba ndiwo mukuru-nokukurumidza chitima kubva St. Pancras Station. Uchawana kakawanda zvakananga nezvitima kusvika Paris’ Gare du Nord yose zuva. Flights kubva London kuti Paris tora anenge 4 maawa apo Airport ndavandira nguva vanoonekwa.
Rovedzai Kubva London kuti Paris nguva – 2:16 f
Flight Time – 3:57 f
Time Aponese:1:41 f
chitima pakufamba ndiyo nzira chokufambisa yakanakisisa kuwana kubva muguta rimwe muNetherlands. Prices are relatively inexpensive as you can book a ticket through the Save A Train website kubva Amsterdam kuna reRotterdam inenge 15 Maeuro nezviratidzo Amsterdam kuna Hague (Den Haag Central) nokuti tarisa 11 euros.
Kufamba Train kubva Amsterdam kuna Düsseldorf:
Zvinotora anenge 2 maawa kuenda pakati Amsterdam Düsseldorf nechitima. Kakawanda zvakananga nezvitima anosvika Amsterdam Central Station yose zuva. Vols Düsseldorf kuna Amsterdam raMwari Schiphol Airport kutora pamusoro 3 maawa.
Rovedzai Kubva Amsterdam kuna Düsseldorf nguva – 2:13 f
Flight Time – 3:10 f
Time Aponese: 0:57 f
Numbers usanyepa! The nguva mari zvoga! The quickest mode of travel in Europe is by Train. Musoro pamusoro yedu Save A Train Website kuwana zvakanakisisa mitengo, mumasekonzi!
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fquickest-mode-travel-europe%2F%3Flang%3Dsn- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#airtravel #ichibhururuka #mode of travel eurostar trainjourney Train Travel chitima rwendo